ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် - ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် Offshore ကုမ္ပဏီပါဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
Million Makers ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက်ဖောက်သည်များအားအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်နှင့်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက် CRM Solutions နှင့်အတူဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက် virtual office၊ Dubai Free Zone နှင့်လူ ဦး ရေ ၁၀၉ ဦး အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အခြားများစွာရှိသည်။
သင်၏ Dubai Free Zone ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အမည်ရှာဖွေပါ
ဒူဘိုင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမြို့တို့၏မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းသည်ယူအေအီးခုနစ်ခုမြောက်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည့်ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ဖွဲ့စည်းမှုကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှလွတ်လပ်ခွင့်အပြီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ဂျီဒီပီ၏သိသိသာသာမောင်းနှင်အားတစ်ခုအဖြစ်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် guests ည့်သည် ၁၅.၉၃ သန်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းမှာလည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်း၏စျေးဝယ်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်း၏မတူညီသောဟင်းပွဲများ၊ စျေးဝယ်စင်တာ ၁၀၀ ကျော်နှင့်များပြားလှသောစတီးလ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကိုရွှေဆိုင် ၂၅၀ နီးပါးတည်ရှိသောကြောင့် 'ရွှေမြို့တော်' အဖြစ်သင့်လျော်စွာရည်ညွှန်းထားသည်။
ဒူဘိုင်းသည်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြှင့်တင်ပေးမည့်မျှော်လင့်ရဆုံး Expo 2020 ကိုရရှိရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ပေါင်း ၂၇၀,၀၀၀ ကျော်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒူဘိုင်းကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်း၏စီးပွားရေးမြို့တော်များအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည် - မြို့တော်ကိုအချိန်နှင့်အမျှနယ်မြေအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးစင်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဤပြိုင်ပွဲတွင်ပြိုင်ပွဲကို ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုနေပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစီးပွားရေးစင်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရဒူဘိုင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးရာနေရာများတွင်တက်နေသောကြောင့်ယခုလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၅ ခုရှိသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကဒူဘိုင်း၏အလွန်ဆက်စပ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဘောင်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစီးပွားရေးမြေနှင့်ငွေနှင့်ဆက်စပ်သောareaရိယာတိုးတက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကုန်သွယ်မှုနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်ဒေသများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစီးပွားရေးနှင့်ဥရောပ၏အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့်မြို့၏တက်ကြွသောစီးပွားရေးအလယ်ပိုင်းတွင်မြို့၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ထူးခြားသောmakeရိယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည်အစိုးရနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောတိုက်ရိုက်အကျိုးတူစီးပွားဖက် (FDI) ဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေသည်နိုင်ငံအတွင်းအတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကိုဤနေရာတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေတွင်မရင်းနှီးသောတာ ၀ န်ယူမှု ၁၀၀% အထိခွင့်ပြုခြင်းအပါအ ၀ င်မရင်းနှီးသောဈေးကစားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားများသည် ၂၀၁၈ တွင် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာသည်။ ၎င်းသည်ဤစီးပွားရေးသည်ပွင့်လင်းမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောဈေးကစားသူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ်မည်သို့တုန့်ပြန်မှုရှိကြောင်းညွှန်ပြသည့်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ပြပွဲ -၂၀၂၀ ဒူဘိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ (၂၀၂၀) ကိုပြသရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ အောက်တိုဘာ (၂၀၂၀) တွင်စတင်ရန်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၂၃) ခုမှလာရောက်လည်ပတ်သူပေါင်း (၂၅) သန်းကိုရက်ပေါင်း (၁၇၃) ရက်ထက်မကသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ပြပွဲကာလအတွင်းယူအေအီးမှ ၁၁ သန်းနှင့်ပြည်ပမှ ၁၄ သန်းသည်ဒူဘိုင်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်မှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအထောက်အပံ့များပေးသောကြောင့်မြို့တော်သို့သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်မယုံနိုင်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒီပြပွဲဟာစွမ်းအင်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ငွေကြေး၊ နေရာဒေသများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တိုးတက်မှုအတွက်ဒူဘိုင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုများထူးခြားတဲ့စီးဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
လမ်းညွှန်အသစ်များကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးနိုင်ငံတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သောပြင်ပမှထွက်ခွာလာသည့်ဗီဇာနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုနေရာတွင်နေထိုင်ရန်သေချာစေရန်ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ဤဗီဇာအစီအစဉ်သည်ယူအေအီးအားအကျွမ်းတဝင်မရှိသောနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စတင်ရန်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိတောင်းဆိုမှုအနည်းဆုံးစီးပွားရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာစေလိမ့်မည်။
ဒီစနစ်ဟာဒူဘိုင်းကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စေတဲ့ချဉ်းကပ်မှု၊ အကျွမ်းတဝင်မရှိသောဖလှယ်မှုနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းတွင်တည်ထောင်ထားသောအခမဲ့ဇုန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဘဏ္financialာရေးအထူးကု၏လိုအပ်ချက်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိုထူထောင်ရန်အရေးကြီးသောဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ရုံးများနှင့်စာပေးစာယူမူဘောင်များအားလုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
စီးပွါးရေး၊ လဲလှယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများအနေဖြင့်မြို့၏အခြေအနေသည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုမှအစအရည်အသွေးသို့ရောက်ရှိသွားပြီးယူအေအီးနိုင်ငံအနေဖြင့်အပြောင်းအလဲများတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူပြင်ပ၌အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဒူဘိုင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အစက်အပြောက်။
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) ခုအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ဒူဘိုင်းရှိသင်၏အလုပ်အကိုင်များပြည့်စုံစေရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုဒူဘိုင်းရှိငှားရမ်းခြင်းအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ အခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ virtual ရုံး၊ ဒူဘိုင်းတွင်အခမဲ့ ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Zone, Dubai Free Zone ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account Dubai Free Zone သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးပေါက် Dubai Free Zone, လုပ်အားအရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အိုင်တီဖြေရှင်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်နာမည်ပေးဖို့ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်။
Dubai Free Zone တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - Dubai Free Zone နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Dubai Free Zone မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်လည်းကူညီသည်။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိစိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ CRM Solutions၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကုန်သည်စာရင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ အခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့သောလွတ်လပ်သောဇုန်များ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကိုအနည်းငယ်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ဖော်ပြရန်။
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Dubai Free Zone နဲ့ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေး၏အတိုင်းအတာအရကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်
Dubai Free Zone စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအတွက် Dubai Design Zone
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Dubai Free Zone
●ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၃၂၀၀
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခွင့်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခ - ဒေါ်လာ ၁၁၅၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်သင့်အတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုစုစည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးကပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင်သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်သို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Dubai Free Zone တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက် Merchant Account
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Dubai Free Zone အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည် Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်သောကြောင့်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်လျှင်ကူညီပေးပါမည် Dubai Free Zone မှကုမ္ပဏီများအတွက် Dubai Free Zone မှကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Dubai Free Zone တွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက် Dubai Free Zone အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ လျှောက်ထားလိုလျှင်၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
Dubai Dubai Free Zone အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းမြင့်မားမှုကြောင့် Dubai Free Zone တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ သင်၏ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Dubai Free Zone တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေများအားအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီးပွါးရေးအတိုင်းအတာနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုတတ်နိုင်သမျှစျေးအသက်သာဆုံးပေးသည်။
Dubai Free Zone ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း။
Dubai Free Zone တွင်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC ။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ရှိဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် / ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC ။
Dubai Free Zone တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / Dubai Free Zone တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် / ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်လိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါက၊ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ထီ၊ လောင်းကစား၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံဆင်းသက်လာသောတူရိယာများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်လိုင်စင်ချပေးရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ အပါအ ၀ င်" ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
ပြုလုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာသည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် Professional CFA နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၌တည်၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ရှိဖောက်သည်များအားကူညီသည်။
ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းတွင်အခမဲ့စီးပွားရေးဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိဒူဘိုင်းစီးပွားရေးဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခမဲ့စီးပွားရေးဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပါဝင်မှု
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုများ
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Dubai Free Zone တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်.
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသင် outsource လုပ်နိုင်သော Dubai Free Zone တွင်ထည့်သွင်းထားသည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၌တည်၏။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဒူဘိုင်းတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၌တည်၏
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်.
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှ။
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်အတွက် CRM ဖြေရှင်းချက်
CRM ဆော့ဝဲ Dubai Free Zone ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်သင်၏ဝယ်သူဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Dubai Free Zone အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။
Dubai Free Zone တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် Dubai Free Zone တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်, ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများတီထွင်ခြင်း။
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေသူများ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးလိုသောမည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့်နေရာတွင်မဆိုထည့်သွင်းရန်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအနက်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တည်ထောင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC ထည့်သွင်းခြင်း။ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း | ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် Dubai Free Zone LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် Dubai Zone မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဒူဘိုင်းဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dubai Free Zone ကမ်းလွန် Dubai Zone မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် Dubai Free Zone LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်အခမဲ့ဇုန်တည်ထောင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ပေါင်းစည်းမှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိ DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နေထိုင်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ကမ်းလွန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် Dubai Free Zone ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ DMCC ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် Dubai Zone ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Dubai Free Zone LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ DMCC IBC ကို Dubai Free Zone တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သောမြို့များမှာ -
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးဆောင်များ
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနေပါတယ်။ ။
Dubai Free Zone တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
Dubai Free Zone တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားများအားမြို့တော်၌လည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dubai Free Zone
Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျမှု။
ကျွန်ုပ်သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် Dubai Zone မှတ်ပုံတင်ခြင်း Dubai Free Zone LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း?
ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Free Zone ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်း၌အခမဲ့ကမ်းလှမ်းထားသောဒူဘိုင်းရှိဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကမ်းလွန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကမ်းလွန် DMCC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန် DMCC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC ပါဝင်မှု၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၏ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၏ကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းဇုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းနယ်မြေနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တည်ထောင်ခြင်း၊ Zone Offshore Dubai Free Zone LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ ကမ်းလွန် Dubai Free Zone LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် Dubai Free Zone LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ပါဝင်သောကမ်းလွန်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် Free Zone LLC နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်နှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကမ်းလွန် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကမ်းလွန် DMCC IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကမ်းလွန် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကမ်းလွန် DMCC IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန် DMCC IBC ပူးပေါင်းမှု၊ DMCC IBC ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်ထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် DMCC ကိုထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ဒူဘိုင်းဇုန်ကိုထည့်သွင်းပါ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင် Dubai Free Zone LLC ထည့်သွင်းပါ DMCC IBC ကိုဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ထည့်သွင်းပါ
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိဟုသုံးစွဲသူများစွာမေးသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဇုန်။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dubai Free Zone တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးကဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုလည်းပေးသည်။ လူသိများသောဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကမင်းအားဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်သောစာရင်းကိုင်များ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးအထောက်အပံ့ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လိုလျှင်၊ သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊
Dubai Free Zone တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတို့မှငွေကြေးခ ၀ ါချမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှာနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းသို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းရေးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်တဲ့တရားမဝင်၊
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းမှသို့မဟုတ်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်၊ ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်သောဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပါ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်သို့ဖြစ်စေ၊
●ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒူဘိုင်းလွတ်လပ်သောဇုန်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်, ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် ဘဏ်အကောင့်, ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် ယုံကြည်မှု ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဒူဘိုင်းအခမဲ့ဇုန်များအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-free-zone/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
The user came to your website from: https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-free-zone/
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-dubai-free-zone/